आफू मरेर गए तर हजारौंलाई पुनर्जन्म दिएर गए, अन्तिम बिदाइमा डाक्टर देवकोटाबारे कसले के भने ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार आफू मरेर गए तर हजारौंलाई पुनर्जन्म दिएर गए, अन्तिम बिदाइमा डाक्टर देवकोटाबारे कसले के भने ?
on: ५ असार २०७५, मंगलवार १६:०७ In: समाचार, स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाडौँ । हजारौँ बिरामीलाई पुनर्जन्म दिएका एक चिकित्सकले क्यान्सरसँगको छ महिना लामो लडाइँपछि मृत्युवरण गरे ।
पुष्पगुच्छाले झपक्क सजाइएको टेबल । त्यसमाथि ढाका टोपी पहिरिएर शान्त चिर निद्रामा निदाइरहेका एशियाकै अब्बल स्नायु चिकित्सक विशेषज्ञ डा देवकोटा । नेपाल मात्र होइन दक्षिण एशियामै ख्याति कमाएका डा उपेन्द्र देवकाटाले सोमबार अन्तिम सास फेरे ।
बाँसबारीस्थित आफ्नै न्यूरो अस्पतालको प्राङ्गणमा राखिएको उनको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जलि दिन शोकाकुल शुभचिन्तकको घुइँचो थामिसक्नु थिएन ।
छ महिनाअघि रोग देखिएपछि परिवारले उनलाई अब्बल बनाएको देश बेलायत पु¥याएको थियो । तर, जीवनका अन्तिम दिनहरु नजिकिएको पूर्व जानकारी पाइसकेका डा देवकोटा अन्तिम सास स्वेदशकै माटोमा फेर्न चाहान्थे । गत वैशाख १५ गते पुनः स्वदेश ल्याइएपछि उनलाई आफ्नै अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको थियो ।
उनको जीवन फर्काउन दिनरात खटिएका उनका शिक्षार्थी न्यूरो अस्पतालका चिकित्सक डा मयुस मुनंकर्मीले डा देवकोटा आफैँ बिरामी र आफैँ चिकित्सकको भूमिका निर्वाह गरेको सम्झन्छन् ।
“आफूलाई के भइरहेको छ, के चाहिएको छ उनले नै भन्दथे, उनीमा मृत्युले कुरिरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि अनौठो आत्मविश्वास थियो, जुन हाम्रा लागि अनुकरणीय थियो”, उनले भने ।
“बिरामीप्रतिको लगाव, आफ्ना अग्रज, सहपाठी, जुनियर चिकित्सकलाई सधैँ माया, सम्मान गर्ने कुरा हामीले उहाँबाट सिक्यौँ,” डा मुनंकर्मी भन्छन् ।
आफ्ना बालसखाको अन्तिम बिदाइ गर्नुपर्ने दिन यति छिट्टै आउँला भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कल्पना पनि गरेका थिएन ।
आफ्ना विधामा दुवै अब्बल । “मैले मेरा बालसखा गुमाएँ, उनीसँगका हरेक पलहरु सम्झनामा समेटिए, उनको मलाई जीवनभर अभाव खट्किरहने छ,” उनले शोकविह्वल हुँदै भने ।
डा. देवकोटाले ३५ वर्ष अगाडि नेपालमा नभएको दुर्लभ र जटिल मानिएको स्नायु सेवा शुरु गरेका हुन् ।
नेपालमा उनको नाम जति सम्मान र गर्वका साथ लिने गरिन्छ दक्षिण एशियाली मुलुकमै पनि उनी उत्तिकै लोकप्रिय भएको वरिष्ठ जनरल सर्जन धु्रव मुडवरीको अनुभव छ ।
“यत्तिको दृढ, आत्मविश्वासी र कठिन परिस्थितिमा विचलित नहुने प्रतिभावान्, आफ्ना गुरुहरुलाई गर्ने सम्मानले मन सधै खुशी हुन्थ्यो, फेरि यस्तो व्यक्ति देशले पाउन वर्षौंवर्ष लाग्नेछ,” उनले भने ।
डा मुडवरीलाई डा देवकोटाले परिवारको सदस्य बनाएका थिए । बिरामीप्रतिको इमान्दारिता र समग्र स्वास्थ्य सेवामा चिन्ता गर्ने स्वभाव कमैमात्र व्यक्तिमा हुन्छ भन्ने डा मुडवरीलाई लाग्छ ।
छोटो समयका लागि स्वास्थ्यमन्त्री बन्नुभएका देवकोटाले चाहने हो भने छोटो समयमा उत्कृष्ट काम गर्न सकिन्छ भन्ने नजिर बसालेको प्रदेश नं ३ का प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइराला सम्झन्छन् ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा कोइराला र डा देवकोटा पनि मन्त्री थिए । प्रदेश प्रमुख कोइरालाले देवकोटाका बारेमा कुरा गर्दै गर्दा उनको शोक आँशु बनी बगिरहेको थियो ।
नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचर्ड मरिसले उनजस्तो प्रतिभावान् व्यक्ति कमैमात्र जन्मिने बताए । राससलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, “उहाँ सफल, मेहनती, इमान्दार चिकित्सक हुनाका साथै असल व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अभाव खट्किरहने छ ।”
आँखाको उपचार सेवामा समर्पित डा सन्दीप रुइत देवकोटा अनुशासित पेशाका उत्कृष्ट व्यक्ति भएको स्मरण गर्छन् । “नेपाली हुँ, नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उनमा सोच र भावना थियो,” उनले भने ।
“मलाई त आमा भन्नुहुन्थ्यो, काम गर्ने भनेर उहाँले रुखो व्यवहार गरेको सम्झना छैन, परिवार बाहिर जाँदा पूरै घरको जिम्मेवारी मलाई हुन्थ्यो, उहाँलाई गुमाउनुको पीडा बोलेर व्यक्त गर्न सकिँदैन”, कान्छी थापा भन्छन् ।
डा देवकोटाको हिजो सोमबार बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा साँझ ५ः३५ मा निधन भएको हो । आज बिहान ८ः०० देखि १३ः०० बजेसम्म श्रद्धाञ्जलिका लागि अस्पतालमा पार्थिव शरीर राखिएको थियो । मृत्युको खबर सुनेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल पुगी परिवारजनसँग भेट गर्दै समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
डा देवकोटाको आजै पशुपतिस्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अत्येष्टि गरिँदैछ ।
‘सगरमाथा म्युजिक अवार्ड २०७५’ हुँदै
५ असार २०७५, मंगलवार १६:०७